विमान दुर्घटना कसको कमजारीले हुन्छ ? गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ – Maitri News
विमान दुर्घटना कसको कमजारीले हुन्छ ? गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ
काठमाडौं । नेपालमा हवाई सेवा सुरक्षित हुन सकेको छैन । आन्तरिक र वाह्य उडानका विमान वारम्बार दुर्घटनामा पर्दा धेरै जनधनको क्षति भएको छ । विमान दुर्घटनामा दोषी को ? कसका कारण वारम्बार विमान दुर्घटना हुने गर्दछन् ।
विमान दुर्घटनामा विमानको बनोट, यान्त्रिक अवस्था,चालक, विमानस्थल, मौसम प्रमुख कारकका रुपमा लिने गरिन्छ । विमान पुराना भए पनि दुर्घटनाको सम्भावना बढी हुन्छ । त्यस्तै यान्त्रिक गडबडीका कारण पनि दुर्घटना हुन्छ । एयर ट्रफिक कन्ट्रोल र चालकबीच समन्वय नहुँदा पनि विमान दुर्घटना हुने गरेका छन । मौसम खरावीका कारण पनि दुर्घटना निम्तिने गर्छ । मूलत चालकको कमजारी वा लापरवाहीका कारण विमान दुर्घटना हुने कुरालाई जोड दिइन्छ । विमान दुर्घटना भएपछि छानविन समिति बनाइन्छ र त्यसैले दिएको प्रतिवेदन हेरेर चित्त बुझाउने गरिन्छ । विमान दुर्घटना हुन नदिन सबै पक्ष इमानदार र सतर्क बन्नुपर्छ । आ आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो भने धेरै हदसम्म विमान दुर्घटना रोक्न सकिन्छ ।
नेपालमा विमान दुर्घटनाको तथ्य निकै दुःखद छ । नेपालको ६९ वर्षको हवाइ इतिहासमा ८५ वटा विमान दुर्घटनामा परेका छन् । सोमबार युएस बंगला विमान दुर्घटनामा परेसँगै नेपालमा दुर्घटना हुने अन्तर्राष्ट्रिय विमानको संख्या ८ पुगेको छ ।
नेपालमा दर्ता भएका बिमान समेत जोड्ने हो भने आइतबारको यो दुर्घटना ८५ औं हो । र, त्रिभुवन विमानस्थलमै ठूलो मानवीय क्षति हुने गरी भएको यो पहिलो दुर्घटना हो ।
नेपालमा अन्तरराष्ट्रिय विमान दुर्घटना पर्दा अहिलेसम्म ३५९ जनाको ज्यान गएको छ । युएस बंगला विमान दुर्घटना पर्नुअघि ३११ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । नेपाली आकाशमा अहिलेसम्म ६५५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । आन्तरिक उडानका जहाज दुर्घटनामा परेर २९६ जनाको ज्यान गएको छ ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको हवाई सुरक्षा महाशाखा प्रमुख सुरेश आचार्यका अनुसार यसअघि टर्किस एयरलाइन्सको सन् २०१५ को मार्चमा त्रिभुवन बिमानस्थलमा नै दुर्घटनामा परेको थियो । तर, टर्किस एयरलाइन्सको दुर्घटनामा भने कसैको पनि ज्यान गएको थिएन । अन्तर्राष्ट्रिय विमान दुर्घटना पर्दा सबै यात्रुको सकुशल उद्दार भएको त्यो पहिलो घटना थियो ।
आचार्य भन्छन् ‘टर्किस एयरलाइन्सको दुर्घटनामा सबै यात्रुको सकुशल उद्दार गरिएको थियो, त्यसैले यो विमानस्थलको हातामा भएको पहिलो ठूलो दुर्घटना हो ।’
नेपालमा पहिलोपटक सन् १९४९ मा चार सिट क्षमताको बोन्यान्जा वीचक्राफ्टा ल्यान्ड भएको थियो । र, जहाज दुर्घटना भने पहिलोपटक सन् १९५५ को फेब्रुअरी ८ मा अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स कालिंगा एयर सिमरामा दुर्घटनामा परेको थियो । जसमा २ जनाको ज्यान गएको थियो भने एकजनाको सकुशल उद्धार गरिएको थियो ।
नेपालमा नै दर्ता भएको जहाज भने सन् १९६१ मे ११ भैरहवामा पहिलो पटक दुर्घटना भएको थियो । जसमा ४ जनाको ज्यान गएको थियो ।
त्यसपछि सन् १९५६ मेमा इन्डियन एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनामा परेको थियो । जसमा १४ जनाको ज्यान गएको थियो भने १९ जनाको सकुशल उद्दार गरिएको थियो ।
अहिलेसम्म नेपालमा भएको ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय बिमान दुर्घटना भने सन् १९९२ मा भएको थियो । १९२२ को सेप्टेम्बरमा पाकिस्तान एयरलाइन्सको विमान भट्टेडाँडामा दुर्घटनामा पर्दा १५७ जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।
त्यस्तै सन् १९५८ मा इन्डियन एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनामा पर्‍यो । जसमा विमानमा यात्रा गरिरहेका २० जनाको ज्यान गयो ।
सन् १९९२ को जुलाइमा नुवाकोटको ग्याङ्देफेदीमा थाई एयरवेजको जहाज दुर्घटनामा पर्‍यो । जसमा बिमानमा रहेका ११३ जनाकै ज्यान गयो ।
त्यसपछि सन् १९९९ मा लुफ्थान्साको कार्गो बिमान दुर्घटनामा पर्‍यो जसमा ५ जनाले जीवन गुमाए ।